Nandrolone Propionate Rap material Soo-saareyaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Warshadda
Nandrolone Budada Dhiiggu waa mid ka mid ah kuwa ugu xoog badan ee anabolic-androgenic steroids oo laga helo suuqa. Waxaa loo isticmaalaa dhismayaasha iyo cayaaraha si ay u kordhiyaan tiro badan oo murqaha iyo istaandarka.
Nandrolone Qalabaynta hindisada (7207-92-3) video
Nandrolone Qodobbada cagaarka ah (7207-92-3) Sharaxaad
Nandrolone Qodobbada Cagaarka ah waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee loo isticmaalo steroids. Waxaa caan ku ah inay suurtogal tahay inay sabab u tahay xaqiiqda ah in Nandrolone Propionate Raw wax soo saartaa saameyn ku yeelashada anabolic oo leh saameyn yar oo astroloji ah. Nandrolone Propionate waa xarun wax ku ool ah oo soo saarta tayada iyo tayada dheer ee muruqa, taasina waxay sabab u tahay nolol maalmeedka dheer ee daroogada (agagaarka 8).
Nandrolone Nooca Cagaarka ah waxaa loo isticmaalaa cudurka dabadheeraad ah, gubasho daran, qalliinka kahor-gaabinta jabista iyo jeexjeexo, waqti-dheer iyo faaqidaad carruurta, iyo sidoo kale kansarka naasaha aan shaqaynin ee aan caadi ahayn dhiig-baxa uterine fibroids iwm. ee dhiig-yare, naas-nuujinta naaska, cudurka angioedema, antithrombin III yaraanta, fibrinogen xad-dhaaf ah, guuldarro koritaanka iyo xanuunka loo yaqaan 'Turner's syndrome' iyo 'prophylaxis' ee cudurka anjioedema.
Nandrolone Qodobbada cagaarka ah (7207-92-3) Smamnuucista
Product Name Nandrolone propionate Qalabka Cagaarka
Magaca Kiimikada 17-PROPIONATE; NANDROLONE 17-PROPIONATE;4-ESTREN-17BETA-OL-3-ONE 17-PROPIONATE;4-ESTREN-17-BETA-OL-3-ONE PROPIONATE;17-beta-hydroxyestr-4-en-3-one 17-propionate;19-NORTESTOSTERONE 17-PROPIONATE;19-NORTESTOSTERONE PROPIONATE
Molecular Wsideed 330.46
barafku Psaliid 55-60 °
dhibic kulayl 453.6 ° C at 760 mmHg
Biological Life-Life wareegsan 8 maalmood
Color crystalline cad
Application Nandrolone propionate Qalabka cagaaran waxaa loo isticmaalaa cudurka dabadheeraad ah, gubasho daran, qalliinka kahor-bogsashada jabka iyo osteoporosis, waqti hore iyo faaqidaan carruurta, iyo sidoo kale kansarka naasaha aan shaqaynin ee aan caadi ahayn ee dhiigga uurjiifka iyo iwm.
Waa maxay Nandrolone Qalabaynta Badeecada Qalabka (7207-92-3)?
Nandro Nandrolone Tixgelinta waa mid ka mid ah garashada calaamadaha anabolis ee ay isticmaalaan dhismayaasha iyo ciyaartoyda si ay u kordhiyaan tamarta iyo istaandarka. Dhalinyaro badan ayaa isticmaala steroid si ay u helaan tiro badan oo murqo iyo xoog. Steroidkani wuxuu inta badan ku jiraa qaabka la isku duro.
Waa a19-ama anabolic androgenic. Waxaa wax laga beddelay si loo keeno isbeddelka sameynta testosterone. Si kale haddii loo dhigo, waa mid ka mid ah derajooyinka testosterone oo leh saameyn anabolic ah laakiin rikoodhka hooseeya ee orrogenic. Waa midka ugu badan ee loo isticmaalo maadaama steroidkani uu yaraynayo DHN halka kuwa kale ee steroids ay yareynayaan DTH.
Nandrolone Waxyaabaha haraaga ah ee loo yaqaan '7207-92-3' wuxuu shaqeeyaa
Nandrolone Qodobbada Cagaarka ah (7207-92-3) waxaa loo tixgeliyay dad badan oo ah steroid guud ee ugu wanaagsan ee loo isticmaalo Nandro (Nandrolone Propionate Raw material) ayaa inta badan lagu duraa afar ilaa shan jeer wiigii. Qaddarkan, isugeynta estrogen waa wax yar sidaa daraadeed gyno wax dhibaato ah ma leh. Qalabaynta jirka, Nandro (Nandrolone Propionate Raw material) ayaa si wax ku ool ah loogu dari karaa labada wareegyo iyo jarista wareegyada. Waxay u fududahay beerka, waxayna kor u qaadaysaa korodhka wanaagsan iyo korodhka xooga iyadoo la yareynayo dufanka jirka.
Nandrolone Qodobka cagaarka ah (7207-92-3) Qiyaasta
Nandrolone Propionate waxaa laga helaa qaab la isku duro. Taasi waa sababta ay waqti yar u qaadato si isku dhafan oo ay noqoto mid firfircoon. Waxay ku saabsan tahay 2 ilaa todobaadyada XNUM si loo ogaado. Sidaas awgeed waxaa la soo jeedinayaa in la joojiyo maamulida Nandrolone Propionate saddex toddobaad ka hor tartanka ama ciyaarta halkaas oo tijaabada baaritaanka lagu ogaanayo daroogada. Sida loogu baahan yahay baahida daweynta waxaa loo isticmaalay 3 ilaa 100mg wiigii si ay ula tacaalaan dhiig yari iyo cuduro kale. Ciyaartoyda qaarkood waxay xitaa isticmaalaan 200 ilaa 300mg toddobaadkii si natiijo wanaagsan leh.
Nandrolone Qalabaynta Qalabka Cuntada (7207-92-3)
Nandrolone Propionate waxaa isticmaala dhismayaasha iyo ciyaartoyda si ay u kordhiyaan tamarta iyo istaandarka. Waxaa kale oo lagu tilmaamaa daaweynta dhiig-yare, naas-nuujinta naaska, cudurka angioedema, antithrombin III yaraanta, xad-dhaafka fibrinogen, ficil la'aanta korriinshaha iyo xanuunka loo yaqaan 'Turner's syndrome' iyo 'prophylaxis' ee cudurka anjioedema.
Soo iibso Nandrolone Qalabaynta Badeecada (7207-92-3) ka Buyaas.com
dib u eegis 1 waayo, Nandrolone Qodobbada cagaarka ah (7207-92-3)
Sheyga NANDROLONE PROPIONATE waa mid aad u faa'iido leh.